သွေးကျဲဆေး ၀ါဖာရင် မှီဝဲနေသူ သတိထားစရာ – Healthy Life Journal
သွေးကျဲဆေး ၀ါဖာရင် မှီဝဲနေသူ သတိထားစရာ
Posted on ဖေ‌ဖျောဝါရီ 17, 2018
မေး. ကျွန်မအဖေက သွေးကျဲဆေး ၀ါဖာရင် မှီဝဲနေရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို စားသင့်၊ ရှောင်သင့်ပါသလဲ။
ဖြေ. ၀ါဖာရင်သောက်နေတဲ့သူတွေ အဓိကရှောင်ရမှာက ဂျင်ဆင်းပါတဲ့ အစားအသောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဂလူကိုစမင်းပါတဲ့ ဆေးတွေကို ဆင်ခြင်ရမယ်။ ၀ါဖာရင်သောက်နေတဲ့သူက INR ကို အမြဲတမ်း စစ်ဆေးနေရပါတယ်။ အဲဒါကိုစစ်လိုက်လို့ ရလဒ်ကကောင်းတယ်ဆိုရင် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဂျင်ဆင်းသောက်လိုက်လို့ INR ရလဒ်က အရမ်းကြီးကျသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်လို့ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ အားဆေးတွေ၊ ဖြည့်စွက်ဆေးတွေထဲမှာ ဂျင်ဆင်းပါတယ်၊ ဂလူကိုစမင်း (Glucosamine) ပါတယ်ဆိုရင် ရှောင်ရပါမယ်။ အဓိကရှောင်ရမယ့် အရာကတော့ အဲဒီနှစ်ခုပါပဲ။
နောက်တစ်ခုက သွေးမထွက်အောင်၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင် သတိထားရပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ ဟင်းရွက်တွေမှာ ဗီတာမင်ကေပါတဲ့အတွက် သွေးခဲစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ ဟင်းရွက်တွေကို ပုံမှန်လောက်စားသင့်ပြီး တအားအများကြီးတော့ မစားသင့်ပါဘူး။ ပုံမှန်စားတာကတော့ သင့်တော်ပါတယ်။
Related Items:blood clots, blood thinner, wafarin
သွေးကျဲဆေး စွဲသောက်လျှင် . . .